February 15, 2009, 8:17 am Filed under: Trip Kuala Lumpur ကို အလုပ်ကိစ္စကြောင့် ခေတ္တရောက်သွားဖြစ်ခဲ့တယ်။ “သူ”အတွက်တော့ အလုပ်ကိစ္စ။ ကျွန်မအတွက်တော့ လျှောက်သွားချင်လို့ “သူ”ခေါ်ရာနောက် သွားဖြစ်ခဲ့သော ခရီး။ အမြဲတမ်း လျင်မြန်သွက်လက်စွာ ၊ တိုးကျိတ်စွာ လှုပ်ရှားနေရတဲ့ ခြင်္သေ့ကျွန်းကနေ ခေတ္တထွက်ခွာရမယ်ဆို တစ်ခါမှ ကျွန်မ မနှေးကွေးခဲ့။ KL မှာ တည်းခိုရာနေရာနဲ့ မနီးမဝေးလောက်ပဲ ကျွန်မလမ်းလျှောက်ရင်း လေ့လာဖြစ်ခဲ့တယ်။ မလေးရှားမှာ အနည်းငယ်ဈေးသက်သာရန်ထင်ထားတာတွေက KL City Centre ရောက်တဲ့နေ့ကတည်းက လန့်သွားခဲ့ရတယ်။ ကားငှားခတွေ စင်္ကာပူထက် ပိုဈေးကြီးတာ ၊ Food Court လိုနေရာမျိုးမှာ အစားအသောက်တွေ ပိုဈေးကြီးတာ သိရရင်း လန့်သွားရတယ်။ စာပြန်ရေးဖို့ လက်က နှေးနေတာကြောင့် အရေးအသားပြန်လည်အစပျိုးတဲ့အနေနဲ့ လျှောက်ရိုက်လာခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေပဲ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ Petronas Twin Towers ကို ပန်းခြံလေးထဲက လှမ်းရိုက်ထားတဲ့ပုံပါ။
Comment by ngapiy
February 16, 2009 @ 1:07 pm Reply	အင်း…ကျွန်းနိုင်ငံမှာ နေပေမယ့် ရေမကူးတတ်ဘူး ဟုတ်လား?😀
February 16, 2009 @ 11:29 pm Reply	when u guys say ‘readabook’, i always wonder what kind of books u guys read.. btw.. ever read “The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable”?
February 19, 2009 @ 4:47 pm Reply	မလင်းလက်ကြယ်စင်ရေ….ဘယ်လို အကြောင်းအရာများကြောင့် မလင်းလက်ကြယ်စင်ရဲ့…ခံစားချက်တွေက နှလုံးသွေးထဲကတောင်…ဆင်းသက်သွားရတယ်ဆိုတာကို…မှန်ကန် တိကျ မုသားကင်းတဲ့…ဖြေရှင်းချက်လေး တစ်စုံတစ်ရာကို…. ကျွန်တော်လို အမေးအမြန်း သိပ်ထူတဲ့ လူတစ်ယောက်က သိချင်ပါတယ်။ (ပို့စ်မှာ တင်ထားတာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မရှင်းလင်းလို့ ထပ်မေးတယ်ဆိုတာထက် လူတစ်ယောက်ရဲ့ လွန်ကဲတဲ့ ခံစားမှုမျိုးကို စိတ်ဝင်စားလို့ ထပ်ဆင့် မေးမြန်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။)
Comment by ၀ိုင်
April 1, 2009 @ 5:02 pm Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI